IFayileFort Backup, yenza ukhuphelo lwalawo onke amaxwebhu, iifoto kunye neefolda zomculo kwiseva ye-FTP | Iindaba zeGajethi
Isigcini seFayileFort, yenza ugcino lwawo onke amaxwebhu, iifoto kunye neefolda zomculo kwiseva ye-FTP
Ugcino lweFayileFort sisixhobo esilula, kodwa esinamandla sokugcina idatha ekuvumela ukuba ugcine ngokuzenzekelayo iifolda zakho kunye nedatha ebalulekileyo kwiindawo ezahlukeneyo ezinje: ukugcinwa kwangaphakathi, i-CD / iDVD / i-Blu-ray drive, iqhuba i-USB flash kunye neeseva ze-FTP ezikude.
Isicelo sikunika isisombululo esikhawulezayo sokwenza ikopi yogcino lwazo zonke ii-imeyile, amaxwebhu, iifoto, umculo kunye nezinye iintlobo zeefayile. Ukuba sisicelo esilula, ayithathi kakhulu izixhobo zenkqubo xa usenza imisebenzi yogcino.
Iwizard yogcino elula ibonelelwa ngokukhawuleza ukuba iqwalasele ukhetho kunye noseto. Yonke imisebenzi esebenzayo kunye nokucwangcisiweyo yokugcina izinto inokulawulwa kwiphaneli enye. Unokukhetha ukuqhuba nawuphi na umsebenzi ocwangcisiweyo wokulungisa okanye uguqule imisebenzi ehleliweyo ixesha kunye nomhla ngokweemfuno zakho.
Ngexesha lofakelo, qiniseka ukuba ukhubaza ukufakwa kwesoftware engafunekiyo kunye notshintsho abalwenzayo kwinkqubo yakho, khubaza nje zonke iindlela onokukhetha kuzo kwaye ucofe ukugqiba.
Njengazo ezinye izixhobo zokugcina, esi sicelo sikwadala imisebenzi yogcino. Unokwenza imisebenzi emininzi njengoko ufuna kwaye emva koko usebenze ngesandla okanye uyicwangcise.
Ukwenza ugcino olutsha, cofa eNtsha kwibar yesixhobo ukuqala iwizard yogcino. Umsebenzi wewizard unamanyathelo amane (Iifayile, UkuGcina oko, Uhlobo loGcino kunye noLuhlu), inyathelo ngalinye libandakanya ukudala umsebenzi wakho wokulondoloza.
Kwinyathelo lokuqala, kufuneka ukhethe iifayile kunye neefolda ofuna ukuzikopa. Unokukhetha iifayile kunye neefolda ngesandla, okanye ucofe kwezinye izinto ezingagqibekanga, ezinje ngamaXwebhu Am, iividiyo zam, njl. Ukwenza ukhetho olukhawulezayo.
Kwakhona, ungangenisa ulwandiso lwefayile kunye nomda wesayizi weefayile ofuna ukuzibandakanya okanye ungazibandakanyi ngexesha lenkqubo yogcino.
Inyathelo elilandelayo likuvumela ukuba uchaze indawo ekuphuma kuyo. Apha, unokukhetha i-USB / ukugcinwa kwangaphandle, ukugcinwa kwendawo okanye ukugcinwa kwenethiwekhi, ukugcina kwi-optical drive efana neCD / DVD / Blu-ray kunye nokugcinwa kwenkxaso kwi-FTP iseva.
Ukuba ukhetha ukhetho lweseva ye-FTP, kuya kufuneka ukongeza iakhawunti ye-FTP ngokuchaza iinkcukacha ezifunekayo, kubandakanya iseva ye-FTP, igama lomamkeli, igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, njl.
Gcina ukhumbula ukuba uhlala ubuyela kuwo nawaphi na amanyathelo akhankanywe apha ngasentla, cofa kumaqhosha abo kwindawo yesixhobo. Into eluncedo ivelisa iifayile zokulondoloza ngaphakathi. I-BKZ kwaye ungasoloko uyibuyisela nangaliphi na ixesha ngokukhetha umsebenzi wakho wesipele, emva koko usebenzise Buyisela ukhetho kwibar yesixhobo. Inkqubo isebenza kwi Windows XP, Windows Vista, Windows 7 kunye neeWindows 8.
Iinkcukacha ezithe xaxe - (
Yenza, ubuze kwaye ucime kwangoko nakweyiphi na inguqulelo yeWindows eneZ-VSSCopy
Yakho? l pth ???? Kubaluleke kakhulu kwiindawo ezahlukeneyo ezifana nokugcinwa kwangaphakathi, i-CD / iDVD / i-Blu-ray drive, i-USB flash drive kunye neeseva zeFTP ezikude.
Umthombo -Ingcebiso eziLongezayo
Iinkcukacha ezithe xaxe - (Yenza, ubuze kwaye ucime kwangoko nakweyiphi na inguqulelo yeWindows eneZ-VSSCopy)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Isigcini seFayileFort, yenza ugcino lwawo onke amaxwebhu, iifoto kunye neefolda zomculo kwiseva ye-FTP
Ezona nkqubo ziPhambili zeP2P ze-Android
Yintoni itekhnoloji yeLCD?